Imigaqo neMeko ngokubanzi yePapernerds | Imigaqo nemiqathango | Ipapernerds
Imigaqo ngokubanzi kunye neemeko kunye nolwazi lwabathengi
Ububanzi: Samkela yonke iodolo kunye nezivumelwano phantsi kokusebenza okukodwa kwezi zilandelayo imigaqo kunye neemeko kwaye konke ukuhanjiswa kunye neenkonzo ezibonelelwa kuthi ekufezekiseni iiodolo zisekwe kule migaqo nemiqathango. Siyaziqonda nje iimeko zakho eziphikisanayo okanye iimeko ezahlukileyo kwimigaqo kunye neemeko zethu ukuba siyavuma ngokucacileyo ukuba semthethweni kwabo ngokubhala. Abathengi ngaphakathi kwentsingiselo yale migaqo neemeko zezo zingaphakathi kwentsingiselo ye-13 BGB. Oosomashishini abanentsingiselo yale migaqo nemiqathango ngabo banentsingiselo ye-14 BGB; Amalungiselelo ale migaqo nemiqathango ngokubanzi yoosomashishini ayasebenza nakumaqumrhu asemthethweni phantsi komthetho woluntu nakwimali ekhethekileyo phantsi komthetho woluntu.
Ulwazi lomthengi lweekhontrakthi zokuthengisa umgama kunye nomgaqo-nkqubo wokurhoxisa: Xa u-oda iimpahla nge-Intanethi / nge-imeyile / ngomnxeba / ngeleta / ngefeksi engahambelaniyo nomsebenzi wakho wezorhwebo okanye ozimeleyo, nceda uqaphele le ngcaciso ilandelayo ifunekayo ngokusemthethweni:
* Iimeko zethu zokuhambisa zisebenza ekuthumeleni ngaphakathi kwiFederal Republic yaseJamani. Amaxabiso emveliso acatshulwe sithi abandakanya iirhafu.
* Unelungelo lokuhlawula izinto ozi-odole nge-invoyisi. Iinkcukacha zebhanki yethu: Fyrst Bank IBAN: DE54 1001 0010 0939 4501 09 BIC: PDNKDEFF. Iitsheki azamkelwa.
* Ii-odolo ngaphakathi eJamani azinazindleko zokuhambisa ukuba iodolo iyonke (ixabiso lilonke le-odolo thabatha iivawutsha ezihlawulelweyo kunye nezinye izaphulelo ezihlawulelweyo) ze-50,00 euro. Ukuba i-odolo iyonke ingaphantsi kwe-50,00 euros, iindleko zokuhambisa nge-3,90 euro ziya kuhlawuliswa.
* Ngekheshi kwii-odolo zokuhanjiswa, nokuba ithini na imali ye-odolo, imali eyimali yokuhanjiswa kwe-EUR 5,60 (ebandakanya i-EUR 3,60 yemali kwintlawulo yokuhambisa kunye ne-EUR 2,00 yemali yokuhlawula).
* Ngaphandle kokuba kuxoxwe ngenye indlela nomthengi ngaphambi kokuba kufakwe iodolo, ukuhanjiswa kuya kwenziwa ngentsimbi ye-00: 00 ngomhla wokuhanjiswa. Ukulungiswa komhla wokuhanjiswa kwangoko kunokwenzeka ngenxa yokuhlawula ngaphezulu.
* Ixesha ekuvunyelwene ngalo lokuqhubekeka (ixesha eliphakathi kokuhanjiswa konikezelo ukuya kumhla wokuhanjiswa) liqala kuphela kwangoko xa kukho konke okuyimfuneko ekusetyenzisweni
Idatha yoku-odola kunye nolwazi zinikezelwe ngumthengi kwaye intlawulo ifunyenwe. Ukuba intlawulo engenayo ihlehlisiwe, kufuneka kuvunyelwane ngexabiso elitsha kwaye kufuneka icaciswe ukuba ingaba i-odolo isenokuphunyezwa na. Esi sithembiso senziwe ngokuhambelana nemigaqo kunye neemeko zethu kuhlobo lwamva nje
Yima, ungazijonga ezi kwiwebhusayithi yethu nanini na. Emva kokufumana intlawulo, uyakufumana isivumelwano semfihlo esiza kutyikitywa (kubandakanya, phakathi kwezinye izinto, ukuhanjiswa kwelungelo lokusebenzisa umsebenzi kuwe, uxanduva lwenkampani lokurhafisa imali engenayo) Zonke iiodolo ziluncedo nje ekwenzeni umsebenzi wobugcisa. Ayigqibanga kwaye kufuneka ihlaziywe ngumthengi, kungenjalo uncedo lomntu wesithathu luya kwenza ukuba abenoxanduva lokutshutshisa. Ii-odolo ezinokulungiswa kwexesha elingaphantsi kweentsuku ezisi-7 azinako ukwenziwa ngokupheleleyo nangokufanelekileyo.
* Kwimeko yokunikezelwa okunqongopheleyo, amaxabiso abo, ubungakanani beenkonzo kunye nexesha lokuchaneka kumiselwa zizibhengezo ezihambelana nazo kwintengiso.
* Isibhengezo sokhuselo lwedatha sokusetyenziswa kweGoogle +
I-plug-in "google + 1" (Google Plus) idityaniswe kwiwebhusayithi yethu. Oku kubonelelwa kwaye kuqhutywa nguGoogle Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (emva koku: Google). Ungaliqonda eli qhosha ngophawu "+1" kwimvelaphi emhlophe. Xa undwendwela iwebhusayithi kwiwebhusayithi yethu equlathe iplagi-ngaphakathi, isikhangeli sakho simisela uqhagamshelo ngqo kwiiseva zikaGoogle, apho umxholo weplagi-in ugqithiselwa kwisikhangeli sakho kwaye udityaniswe kwiwebhusayithi. Ngenxa yoko, ulwazi olutyelele iwebhusayithi yethu luthunyelwa kuGoogle. Ukuba ungene kwiakhawunti yakho yomsebenzisi ngeGoogle Plus okanye uGoogle ngelixa undwendwela iwebhusayithi yethu, uGoogle angabela iwebhusayithi ukuba iye kule akhawunti. Ngokunxibelelana nee-plug-ins, o.k.t. ngokunqakraza iqhosha okanye ukushiya uluvo, olu lwazi luhambelanayo ludluliselwa ngqo kuGoogle kwaye ligcinwe apho. Ukuba ufuna ukuthintela ukuhanjiswa kwedatha, kuya kufuneka uphume kwiGoogle Plus okanye kwiakhawunti kaGoogle ngaphambi kokundwendwela iwebhusayithi yethu. Asinampembelelo kububanzi kunye nomxholo wedatha eqokelelwa nguGoogle ngeqhosha. Sicinga ukuba idilesi yakho ye-IP iya kubhalwa kwaye ihanjiswe. Unokufumana malunga nenjongo, ubungakanani kunye nokusetyenziswa kwengqokelela yedatha ishishini Yazisa uGoogle Inc. ngolwazi lwabo lokhuselo lwedatha. Ungayifumana le webhusayithi kwi-URL http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Njengelungu leGoogle Plus, ungathintela uGoogle ekuqokeleleni idatha malunga nawe xa undwendwela iwebhusayithi yethu idityaniswe nelungu ledatha eligcinwe nguGoogle ukuba uphuma kwiGoogle Plus okanye kuGoogle ngaphambi kokundwendwela iwebhusayithi yethu.
* Ixesha lesikhalazo ziiveki ezi-2 emva kokuhanjiswa komsebenzi. Guqula izicelo ezithunyelwe emva kwalo mhla wokugqibela zihlala zingabalulekanga kwaye azisakwazi ukwenziwa.
* Isibhengezo sokhuselo lwedatha kwiiplagi zika-YouTube
Iiplagi ezivela kuYouTube.de/Youtube.com zisetyenziswa kwiwebhusayithi yethu. Inkonzo iqhutywa yiYouTube, LLC, Cherry Ave., e-USA-emelwe nguGoogle Inc. Ukuba undwendwela iwebhusayithi yethu nge-plugin enjalo, uqhagamshelo kwiseva ze-YouTube ziya kusekwa kwaye iplagi iya kubonakala kwiwebhusayithi ngomyalezo kwisikhangeli sakho. Oku kuya kudlulisela kwiseva yeYouTube yeyiphi iwebhusayithi yethu oyindwendweleyo. Ukuba ungene njengelungu le-YouTube, i-YouTube iya kunika olu lwazi kwiiakhawunti zakho zomsebenzisi kwezi ziqonga. Xa usebenzisa ezi plugins, njengokucofa / ukuqala amaqhosha kwividiyo okanye ukuthumela uluvo, olu lwazi lubelwe iakhawunti yakho yomsebenzisi weYouTube, umzekelo, onokuthintela kuphela ngokungena ngaphandle ngaphambi kokusebenzisa iplagi. Unokufumana ulwazi ngokuqokelelwa kunye nokusetyenziswa kwedatha ngeqonga okanye iiplagi kulwazi lokukhuselwa kwedatha ye-YouTube apha: www.youtube.com (
* Nceda ukhumbule ukuba akufuneki ubeke umsebenzi wakho ngomhla wokungeniswa, kodwa endaweni yeentsuku ezili-10 okanye ubuncinci iintsuku ezi-2 ngaphambi komhla wokungeniswa kwakho. Oku kusindisa omabini amaqela uxinzelelo oluninzi. Ewe kunjalo, sinokuhambisa nomsebenzi kuwe ngokulandelelana ngexabiso elifanelekileyo.
* Kwiimviwo ze-e / kwiimviwo ezikwi-Intanethi, umbhali ubhukishelwe ngokuqinisekileyo umhla. Ukubuyiselwa kwemali akunakwenzeka ukuba umhla uhlehlisiwe.
Le webhusayithi isebenzisa iHotjar. Umboneleli nguHotjar Ltd., iNqanaba 2, iZiko leShishini iSt Julians, 3, Isitalato i-Elia Zammit, iSt Julians STJ 1000, iMalta, iYurophu (iwebhusayithi: https://www.hotjar.com). Siqukumbele ikhontrakthi yoku-odola kunye neHotjar ukuze siphumeze imigaqo engqongqo yokukhusela idatha yaseYurophu. IHotjar sisixhobo sokuhlalutya indlela oziphatha ngayo kwiwebhusayithi yethu. NgeHotjar sinokurekhoda imouse yakho kwaye uskrole iintshukumo kunye nokucofa. IHotjar inokumisela ukuba uhleli ixesha elingakanani nesikhombisi semouse kwindawo ethile. Ukusuka kolu lwazi, iHotjar yenza iimephu ezibizwa ngokuba bubushushu, ezinokusetyenziselwa ukumisela ukuba zeziphi iindawo ezithandwa kakhulu ngabatyeleli bewebhusayithi. Singajongisisa ukuba uhleli ixesha elingakanani ephepheni kwaye ulishiye nini. Sinokumisela ukuba ngeliphi ixesha apho wawarhoxisa khona amangeniso akho kwifom yoqhakamshelwano (ebizwa ngokuba ziifanele zokuguqula). Ukongeza, iHotjar inokusetyenziselwa ukufumana ingxelo ngokuthe ngqo kubakhenkethi bewebhusayithi. Lo msebenzi usebenza ekuphuculeni ukunikezelwa kwewebhu. IHotjar isebenzisa ikuki. Iicookies ziifayile zombhalo ezincinci ezigcinwe kwikhompyuter yakho kwaye zigcinwe ngumkhangeli wakho. Zisebenza ukwenza umnikelo wethu ubenomsebenzisi ngakumbi, usebenze ngakumbi kwaye ukhuseleke. Ezi cookies zingasetyenziselwa ngokukodwa ukumisela ukuba iwebhusayithi yethu ityelelwe sisixhobo esithile okanye ingaba imisebenzi yeHotjar iyekisiwe ukusebenza kwisikhangeli esichaphazelekayo. Ii-cookies zeHotjar zihlala kwisixhobo sakho de uzicime.
Ungaseta isikhangeli sakho ukuze waziswe ngokuseta ii-cookies kwaye uvumele ii-cookies kwimeko nganye, ungabandakanyi ukwamkelwa kweicookie zamatyala athile okanye ngokubanzi, kwaye wenze ukucinywa kweicookies ngokuzenzekelayo xa uvale isikhangeli. Ukuba ii-cookies azisebenzi, ukusebenza kwale webhusayithi kunokuthintelwa. Ukusetyenziswa kweHotjar kunye nokugcinwa kwicookies zeHotjar kusekwe kubugcisa. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Umnxibelelanisi wewebhusayithi unomdla osemthethweni ekuhlalutyeni indlela aziphethe ngayo umsebenzisi ukuze akwazi ukusebenzisa iwebhusayithi kunye nentengiso yakhe. Ukuba ungathanda ukukhupha ingqokelela yedatha nguHotjar, cofa kwikhonkco elilandelayo kwaye ulandele imiyalelo apho: https://www.hotjar.com/opt-out. Nceda uqaphele ukuba iHotjar kufuneka ingasebenzi ngokwahlukeneyo kwisikhangeli ngasinye okanye kwisixhobo ngasinye sokuphela. Ngolwazi oluthe kratya malunga neHotjar kunye nedatha eqokelelweyo, nceda ujonge kwisibhengezo sokukhuselwa kwedatha sikaHotjar phantsi kwesi sixhobo silandelayo: https://www.hotjar.com/privacy
* Amaxesha ethu enkonzo kwii-odolo ezikhoyo nguMvulo ukuya ngeCawa ukususela nge-9: 00 kusasa ukuya ku-18: 00 emva kwemini.
* Sifuna izicelo zokulungiswa ngokubhala kwaye hayi ngomlomo. Ke ukuba ufumene umsebenzi kwaye ufuna inqaku ukuba lilungiswe, oku kunokwenzeka ukukhanya ngokubhaliweyo kunye hayi ngomlomo. Umnxeba oya kumphathi awunanjongo okwangoku. Mbhalele i-imeyile kwaye udwelise inqaku ngokweenkcukacha. (Umzekelo 1 inqaku lembumbulu elinesivakalisi esinye esinamagama ama-1 kwaye akukho maphepha ma-5 okubhaliweyo okuqhubekayo.) Isiteyitimenti ngokubanzi ndifuna ukulungiswa okanye ndingathanda ukukhalaza, ngoko ke asinakho ukunika umbhali nayiphi na imiyalelo malunga nokuba yeyiphi na engalinganiyo nokuba yintoni ekufuneka ayiphucule ngokuthe ngqo. Imvelaphi kukuba kufuneka sidlulise ulwazi kumbhali kwaye isebe elisemgangathweni lijonga ukulungiswa kombhali kunye nengxelo: "I-Hook kuyo ngoku iyahambelana, yaphuculwa ngumbhali."
* Ukuba ulwazi luthunyelwe kamva, oku kuya kumisa umhla wokuhanjiswa ngokuzenzekelayo ngexesha eliphakathi kokubekwa komyalelo kunye nexesha esifumana ngalo ulwazi. Ixabiso elitsha lokuthengisa nalo kufuneka kuvunyelwene ngalo ukuba oku kuyonyusa umthwalo kuluvo lwethu.
* Sithatha inxaxheba kwiinkqubo zokudibana. Kule meko, umboneleli wenkqubo yokubambisana ugcina nokuba ucofa kwikhonkco elixhasiweyo kwindawo yethu kwaye uthenge imveliso okanye inkonzo kwelinye lamaqabane ethu. Ukukhusela idatha yakho kwiiwebhusayithi zangaphandle, nceda uqaphele ukubhengezwa kokukhuselwa kwedatha komboneleli wangaphandle.
* Zonke iiodolo zenzelwe kuphela njengoncedo lokwenza umsebenzi wobugcisa. Ayigqibanga kwaye kufuneka ihlaziywe ngumthengi, kungenjalo uya kuzenza uxanduva lokutshutshisa ngoncedo lomntu wesithathu. Ngesi sizathu, izikhalazo azizukwenziwa. Ii-odolo ezinokulungiswa kwexesha elingaphantsi kweentsuku ezisi-7 azenzeki ngokufanelekileyo kwaye ngokomgangatho zinokwenzeka, emva koko sizama ukuwenza umsebenzi kangangoko kunokwenzeka.
* Izilungiso zenziwa ngaphandle kwentlawulo kunye nexesha lokuhanjiswa kweentsuku ezili-7 ukuya kwezi-21 emva kwesaziso solungiso ukuba isaziso siphakathi kwexesha lesikhalazo. Ukuba izicelo zolungiso ziya kwenziwa kunye nexesha lokuhanjiswa elingaphantsi kweentsuku ezingama-21, intlawulelo yokulungisa kufuneka ichongwe nomphathi kwaye ihlawulwe ngumthengi. Ukuba isikhalazo sichaphazela ukwanda komgangatho womsebenzi hayi impazamo, oku kuyabiza. Amaxabiso kufuneka kuvunyelwane ngawo nomphathi kwaye ahlawulwe ngokwezicelo zokuphucula umgangatho.
Ukusetyenziswa kweGoogle reCaptcha
Ukukhusela ifom yoqhakamshelwano ngokusetyenziswa okungafunekiyo, sisebenzisa i-reCaptcha service evela kuGoogle Inc. Le nkonzo isenza sikwazi ukwahlula ukuba ngaba igalelo lenziwe ngumntu okanye ngokungafanelekanga kwaye ngokuzenzekelayo ngumatshini (spambot). Ukulungiselela le njongo, idilesi ye-IP kunye nayo nayiphi na enye idatha efunekayo kuGoogle Inc.yenkonzo ye-reCaptcha iya kudluliselwa kuGoogle Inc. Izibonelelo zokukhusela idatha ezahlukileyo zikaGoogle Inc.zisebenza kule datha. Ungazifumana apha: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
* Ukuba akukho sakhiwo sichazwe ngumthengi, umbhali uya kwenza ubume. Utshintsho oluncinci lwesakhiwo lunokwenzeka, nangona kunjalo utshintsho olupheleleyo lwesakhiwo lunokwenzeka kuphela ngentlawulo eyongezelelweyo ukuba umthengi akayithandi.
* Ngokubanzi sisebenzisa idatha oyinikezelayo ngaphakathi kwesakhelo sezibophelelo zethu zesivumelwano okanye ukubonelela ngenkonzo yesivumelwano ngokungqinelana nemigaqo kunye neemeko ekufuneka zamkelwe nguwe nangokwengqiqo ebonelelwe ngumhla, okt ngokusisiseko kuphela ngokwengcinga ekujongwe kwaye icace nguwe , ngakumbi ukuqhubekekiswa kwesivumelwano. Kule meko, sichaza ngokucacileyo ukuba idatha yakho iya kugqithiselwa koonokontraka abenza lo myalelo unxibelelwano baleka nawe. Ezi kontraktha zisekwe kwi-EU kunye / okanye eSwitzerland, eqinisekisa inqanaba elaneleyo lokhuseleko lwedatha.
Iindlela zokucaphula ziphunyezwa ngale ndlela ilandelayo: Ukucaphula umbhalo osemazantsi z. B.: Bona uBauer, C. (2018), iphe.19 f okanye Ucaphula njani uHarvard z. B.: Naye [uBauer, 2018] uthi ... okanye Ukucaphula i-APA z. B.: Kwakhona [uBauer, 2018, iphe. 18] uthi ...
* Ukuba idatha yakho idluliselwe kwezinye iinkampani okanye kwiikontraki ezingaphantsi, oku kuyakwenzeka kuphela ngokuhambelana nemigaqo ekhoyo yokhuseleko lwedatha kunye nokuzalisekisa uxanduva lwesivumelwano.
* Ukuba imali ibuyisiwe, intlawulo iyakwenziwa ngolibaziseko lweentsuku ezili-15 ukuya kwi-15 okanye kowama-31 enyangeni. Ukuba, umzekelo, ukubuyiselwa imali kumiselwe nge-20.07 kaJulayi, umthengi uya kuyifumana nge-15.8 ka-Agasti kwangoku. intlawulo. I-10.7. intlawulo iya kuba nge-31.7/XNUMX ngokulandelelana.
* Sigunyazisiwe ngokucacileyo ukubonelela ngabantu besithathu, o.k.t. abavelisi beenkcukacha okanye ababoneleli ngeenkonzo, ngedatha efunekayo ekusebenzeni kwe-portal ukuze kuzalisekiswe uxanduva lwethu oluvela kubudlelwane bomsebenzisi, okanye ukuqokelela nokwenza le datha kubantu besithathu. Abantu neenkampani esizigunyazisa ukuzalisekisa uxanduva lwethu banyanzelekile ukuba bathobele le miqathango.
* Unikezelo lusemthethweni ngokuhanjiswa kwemihla ye-0-3 yeentsuku iiyure ezingama-2 emva kokufumana isithembiso. Okanye ngokulandelelana usuku olu-4 ukusuka kwiintsuku ezi-8 ukuya kwezi-1, iintsuku ezi-9 ukusukela kwiintsuku ezili-15 ukuya kwezi-2, iintsuku ezi-16 ukusukela kwiintsuku ezingama-31-3. Izibonelelo ezinomhla wokuhanjiswa kweentsuku ezingama-32 nangaphezulu ziphelelwa emva kweentsuku ezi-4.
* Kwimeko yokunikezelwa ngeempazamo ezivela kubathengi okanye kuthi, akukho lungelo kwixabiso elinikiweyo / ubungakanani beenkonzo.
* Kwimeko yolwazi / imisebenzi emitsha okanye iimpazamo ngumthengi okanye sithi, akukho lungelo kwixabiso elinikiweyo.
* Kuba lo ngumsebenzi / inkonzo eyenzelwe ngokukodwa umthengi, ayinakutshintshwa. Ngokusisiseko, xa iodolo ibekiwe (ngohlobo lokuhambisa / lokufumana intlawulo), singena kwi-100% yeendleko zomyalelo. Kwimeko yokubuyiselwa kwemali ngenxa yesiphene, ubuninzi be-10% yeendleko zinokubuyiselwa. Imali yokubuyiselwa kwemali ixhomekeke kubukhulu besiphene. Ukuba ixesha lokuhambisa lingaphantsi kweentsuku ezisi-7, akukho lungiso lunokwenzeka kwiintsuku ezisi-7.
* Ngaphandle kokuba kuceliwe / kuvunyelwene ngenye indlela, itemplate yakho iya kusiwa ifomathiwe ngolu hlobo lulandelayo: Ubungakanani bomgca wefonti u-12 1.5 isithuba somgca esifanelekileyo; I-3,5 cm yemida ekhohlo, ekunene, phezulu nasezantsi; Indlela yokucaphula: imibhalo esemazantsi; Ifayile ye-MS Word; Imilinganiselo. Amagama angama-270 (okt +/- amagama angama-30) okanye i-approx.1800 yoonobumba (okt +/- abalinganiswa abangama-300) kwiphepha ngalinye lesicatshulwa esiqhubekayo. Ukuba kukho imifanekiso bambalwa abalinganiswa namagama kwiphepha; Uluhlu lwasimahla xa uodola itemplate ngaphezulu kwamaphepha ama-5: kunye nephepha lokugubungela, uluhlu lwamanani / izifinyezo / iitafile / imixholo / ibhibliyografi. Ukuba ifomathi yefomathi yakho enobungakanani obahlukileyo befonti, ifonti kunye nemida yamaphepha zikhokelela kumaphepha ambalwa kunenani lamaphepha ayalelweyo, singakuvuyela ukuhambisa amaphepha akhoyo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka sikubhatalele la maphepha. Asinakho ukwamkela izivumelwano zomlomo okanye ezibhaliweyo okwangoku, kuba sinexabiso eliphantsi kakhulu kwiphepha ngalinye kwaye kungenjalo asisayi kuphinda sihlawule iindleko.
* Sinelungelo, emva kokuba unike imvume yakho, yokuthumela iindaba malunga nesithembiso sethu kwiinkcukacha zonxibelelwano ozifakileyo, okoko ungakhange uchasane nokusetyenziswa kwedatha yakho ngokubhala.
* Sibonisa ukuba senza iitemplates kuphela kwaye azinakungeniswa njengentsebenzo yoviwo. Ngesi sizathu, izikhalazo azizukwenziwa. Ukuba usahambisa itemplate esiyenzileyo njengoviwo, asinakukunika isiqinisekiso sebakala okanye isiqinisekiso sokuba uya kuphumelela- kodwa kunjalo sifuna ukukunika iphepha elifanelekileyo lemfundo!
* Ukongeza kwidatha oyinike ukupapasha, ngakumbi idatha oyenze yafumaneka kuthi ngenxa yokuqhutywa kwekhontrakthi ngeenjongo zangaphakathi, siya kwenza ukuba kufumaneke kubantu besithathu ukuba kukho uxanduva olusemthethweni oluhambelanayo okanye ukukhusela umdla osemthethweni.
* Ngenxa yeemfuno zomthetho, kunokwenzeka ukuba sinyanzelekile ukuba sigcine idatha yakho ngaphezulu kwexesha lokusebenzisa iwebhusayithi yethu-ngakumbi ngeenjongo zerhafu. Nangona kunjalo, siya kuhlala siyigcina idatha ukuya kuthi ga kwimfuneko, sithathela ingqalelo izibonelelo ezisemthethweni.
Kuba imeko yale nkampani ayiziphathi kakuhle kwaye ayisiyiyo esemthethweni, umthengi urhoxa kwimbuyekezo kwaye urhoxisa ukubuya kwentlawulo kwangaphambili.
Sisebenzisa ii-cookies ekusebenzeni kwewebhusayithi yethu kunye nenkonzo enikezelwayo. Ezi ziifayile zetekisi ezincinci ezigcinwe kwikhompyuter yakho.
* Kwiimviwo ze-e / kwiimviwo ezikwi-Intanethi, umbhali ubhukishelwe ngokuqinisekileyo umhla. Imbuyekezo ayinakwenzeka ukuba umhla uhlehlisiwe.
* Siyavuya ukukunika iinkonzo ezongezelelekileyo ezinokubhukisha ngokungabizi mali ininzi ukuze unikeze umthengi ngamnye ngenkonzo angathanda ukuba nayo.
* Sisebenzisa ii-cookies ezicinyiweyo kwakhona emva kokuphela kweseshoni yebrawuza (ebizwa ngokuba zii-cookies ze-ID zeseshoni). Iicookies zisetyenziselwa ukugunyazisa, ukuchonga kunye nokufumana ulwazi olukhethekileyo olufana nolwazi malunga nokuba ufuna ukuhlala ungene. Iicookies zicinywa ngokuzenzekelayo emva kweyure e-1.
Sikwasebenzisa ikuki ezigcinwe kwiKhompyuter yakho. Ngeenjongo zokudibanaMarketing okanye ukujolisa kwakhona. Ukuba iicookies zigcinwa kwiPC yakho, unolawulo malunga nokuba ziya kucinywa nini kwaye nini. Nceda usebenzise umsebenzi ohambelanayo kwisikhangeli sakho koku.
* Sisebenzisa amanyathelo obuchwephesha kunye nemibutho ukukhusela iiwebhusayithi zethu kunye neenkqubo ezinxulumene nokuchithwa, ukutshatyalaliswa, ukufikelela, ukulungiswa okanye ukuhanjiswa kwedatha yakho ngabantu abangagunyaziswanga.
* Ungaseta isikhangeli sakho ukuze waziswe malunga nokucwangciswa kweicookies, uthathe isigqibo kwimeko nganye-nokuba ungavumi ii-cookies. Ukuba awuzamkeli iikuki, ukusebenza kwewebhusayithi yethu kunokuthintelwa. Nceda ujonge incwadana yomsebenzisi yesikhangeli sakho okanye umenzi webrawuza ukuze ufumane ukuba iinkqubo zisetelwe ngokufanelekileyo. Ubungqina besazisi, njengoko sifuna ii-invoice zabathengi abavela kwiofisi yerhafu kwaye asinakho ukubalula abathengi abangaziwayo Sithanda ukubonisa ukuba idatha yakho yobuqu iya kuqokelelwa kwaye igcinwe kunye nesiphelo sesivumelwano kwi-odolo ngokungqinelana noMmiselo woKhuseleko lweDatha Jikelele we-25 Meyi 2018 Inqaku 6 (1) c kunye ne-GDPR. Kukwenzelwe ukuba kuqinisekiswe ukuba ukuchongwa komntu kukhuselekile ukulungiselela injongo eyenzelwa yona. (§ 5 (1) e GDPR Umthengi unoxanduva lokuchaneka kwedatha yobuqu.
Ngokwemigaqo yokuKhuselwa kweDatha ngokuBanzi, amaNqaku 13 kunye ne-14 GDPR, kukho uxanduva lokubonelela ngolwazi, oko kuthetha ukuba wonke umthengi unokufumana ulwazi malunga nedatha eqokelelweyo yaza yaqwalaselwa ngesicelo. Unelungelo ngokwe Inqaku le-17 GDPR lokususa idatha yakhe yobuqu emva kokuba beyenzile injongo kwaye akusafuneki. Sinelungelo lokuphanda ityala lolwaphulo-mthetho xa kuthe kwadluliselwa iinkcukacha ezingachanekanga (idilesi ye-imeyile, idilesi, njl. Njl.). (§ 263 ubuqhetseba be-StGB) Idatha ehanjiswa emva kokuba i-odolo ibekiwe okanye intlawulo ayisenakuthathelwa ngqalelo kulomsebenzi kwaye inokudityaniswa nomsebenzi. Ukuba le datha izakufakwa emsebenzini, i-odolo entsha okanye ixabiso elitsha kunye nomhla wokuhambisa omtsha kufuneka kuvunyelwane ngawo kwi-odolo esele ikho.
* Ukuba ukusebenza kwakhona kuthatha ngaphantsi kweentsuku ezili-9, intlawulo eyongezelelweyo iyimfuneko ngokuxhomekeke kumthwalo womsebenzi kunye nexesha lokulungisa.
* Isivumelwano sokuthenga sisebenza xa uhlawula.
Ukulibaziseka kunye nokungenzeki: Ukuba wena, kwimeko yokulibaziseka okanye engenakwenzeka, ufuna imbuyekezo endaweni yokusebenza, asinabutyala.
Ukutshintshwa komngcipheko: Ukuba ungumthengi, umngcipheko wokulahleka ngengozi okanye ukonakala ngempazamo kweempahla zigqithiselwa kuwe xa iimpahla zinikezelwa kuwe, nokuba iimpahla zithengiswa ngeposi. Ukuba uya-oda njengosomashishini, umngcipheko wokuphulukana ngengozi kunye nokudodobala ngengozi kwempahla idlula kuwe kwakamsinya nje ukuba iimpahla zinikezelwe kwinkampani yezothutho. Kuyafana nokunikezela ukuba awamkelekanga ngokwamkelekileyo.
KumThetho oYilwayo: Ukumiselwa kuvunyelwe kuphela ngamabango angenakuphikiswa okanye asekwe ngokusemthethweni. Unokusebenzisa kuphela ilungelo lokugcina ukuba usekwe kubudlelwane obufanayo.
Isiqinisekiso: Umxholo wesivumelwano sisodwa imveliso ethengiswe kunye neepropathi kunye neempawu kunye nokusetyenziselwa okujolise kuko ngokungqinelana nenkcazo yemveliso efanelekileyo. Ixesha lokuthintelwa kwamabango ewaranti kwimeko yokusilela kwento ebonakalayo yiminyaka emi-2 ukususela ekufumaneni iimpahla. Ukuba ungumthengi, kufuneka kuqala ukhethe ukuba intsebenzo eyongezelelweyo iya kwenziwa ngokulungiswa okanye ukutshintshwa. Nangona kunjalo, sinelungelo lokwala uhlobo lwentsebenzo eyongezelelweyo ekhethiweyo ukuba kunokwenzeka kuphela kwiindleko ezingalinganiyo kwaye olunye uhlobo lwentsebenzo eyongezelelekileyo luhlala lungekho ngaphandle kwako. Ukuba intsebenzo eyongezelelekileyo iyasilela okanye ukuba umhla wokugqibela obekiweyo udlulile ngaphandle kwesiphumo, unokuthi, ngokokubona kwakho, ucele ukunciphisa kwixabiso lokuthenga (ukunciphisa) okanye ukurhoxiswa kwesivumelwano (ukurhoxa). Ngaphandle kokuba unelungelo lokufumana imbuyekezo ngomonakalo endaweni yokusebenza, ubungakanani bayo busekwe kwimimiselo esemthethweni.
Akukho xanduva lunokucingelwa umxholo womsebenzi okanye ukuchaneka kwawo. Umahluko koku bububanzi (inani lamaphepha, amagama okanye abalinganiswa). Umbhali unokusebenza okanye abhale kuphela njengoko ebonelelwa ngolwazi kunye nokubalulwa ngumthengi. Omnye umngcipheko ulele kumthengi ngokwakhe.
Kuba le nkampani ayiziphathi kakuhle kwaye ayisiyonto esemthethweni, umthengi urhoxisa nayiphi na imbuyekezo ngokuthumela isicelo.
Okokugqibela, amanye amabango, ahambelana nokunikezelwa okungafezekanga okanye okungachanekanga okanye ukophula izibophelelo zesibophelelo sesibini ekunikezelweni, kunye nalo naliphi na ityala elilelethu lokophula umsebenzi ngokungakhathali ayifakwanga, ngaphandle komthetho osekelwe kuwo (umz. (kunye nokwaphula isivumelwano); oku akusebenzi ekophuleni izibophelelo ngexesha lothethathethwano lwesivumelwano. Oku kungabandakanywa akusebenzi kumonakalo osekwe ngabom okanye ngokungakhathali ukwaphula ikhontrakthi kwicala lethu okanye omnye wabameli bethu bezomthetho okanye iiarhente ezigwenxa, kwaye ayikuko nomonakalo obangelwe kukwenzakala ebomini, emzimbeni okanye kwimpilo yomntu owenzakeleyo esinoxanduva lwethu. Oku kusikelwa umda ngentla kwityala akuchaphazeli amabango akho phantsi koMthetho woTyala lweMveliso. Asinaxanduva lokujongana neempahla zakho neemfuno zakho, ngaphandle kokuba oku kuvunyelwene ngokucacileyo ngembalelwano kwangaphambili okanye sivumelene ngokucacileyo. Naliphi na iwaranti kunye noxanduva akubandakanywa kwiziphumo ezivela ekuphatheni ngokungafanelekanga, ukusebenza ngokungachanekanga okanye utshintsho kwiimpahla ezenziwe nguwe okanye ngabanye egameni lakho.
Ukugcinwa kwesihloko: Into ethengwayo ihlala iyipropathi de ube uhlawule ixabiso lokuthenga ngokupheleleyo. Ukugcinwa kwetayitile kukwasebenza kuwo onke amabango esiwafumene wona ngokuchasene nento ethengwayo. Ngexesha lokugcinwa kwetayitile, unelungelo lokuba ngumnini kwaye usebenzise into oyithengileyo ngokungqinelana nekhontrakthi, ukuba nje uyayithobela imiqathango yokugcinwa kwetayitile ngexesha elifanelekileyo. Unelungelo lokuthengisa kwakhona into oyithengileyo kwindlela yesiqhelo yeshishini. Sele usabela onke amabango ngokwexabiso le-invoyisi yebango lethu, olongezelela umntu wesithathu ngokuthengisa kwakhona. Siyasamkela isabelo. Emva kwesabelo, ugunyazisiwe ukulanda ibango. Sinelungelo lokuqokelela ibango ngokwethu nje ukuba usilele ukuhlangabezana ngokufanelekileyo noxanduva lwakho lokuhlawula. Unyango kunye nokulungiswa kwento yokuthenga kuhlala kwenzeka egameni lethu nasesikhundleni sethu. Ukuba izinto zigqityiwe ezingezozethu, sifumana ubunini bobambiswano lwento entsha ngokulingana nexabiso lento ethengwayo ehanjiswe sithi kwezinye izinto eziqhubekileyo. Kuyafana ukuba into yokuthenga ixutywe nezinye izinto ezingezizo ezethu. Sithembisa ukukhupha iziqinisekiso esinelungelo kuzo ngokwesicelo sakho, ukuba ixabiso lazo lingaphezulu kwamabango anokukhuselwa ngaphezulu kwe-20%. Unyanzelekile ukuba usinike lonke ulwazi olufunekayo ngaphakathi komda wokulandela amalungelo kugcino lwetayitile ekuvunyelwene ngalo. Sinelungelo lokurhoxa kwisivumelwano kwaye sifune ukubuyiswa kwempahla kwimeko yokuziphatha kwakho ngokuchasene nekhontrakthi, ngakumbi kwimeko yokungahlawuli. Ngaphandle kwezinto ezixhomekeke kumthetho welungelo lokushicilela zibandakanyiwe kubungakanani bokunikezelwa, unikwa ilungelo elilula, elingenasiphelo, elingenakudluliswa, elingenakudluliselwa kunye nelungelo elingasetyenziswanga lokusebenzisa ubungakanani bempahla, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kwimiqathango yelayisensi ethile yeempahla.
Ukukhuselwa kwedatha; Imvume yengcebiso, ulwazi (intengiso) kunye nentengiso: Sinelungelo lokuqokelela, sigcine kwaye sisebenzise idatha yakho yobuqu efunekayo kwimeko yobudlelwane beshishini ngaphakathi kwentsingiselo yoMthetho woKhuseleko lweDatha. Ukongeza, uyasivumela ukuba sikuthumele ulwazi lokuthengisa kwizinto ezithengiweyo kunye / okanye ezinye iimveliso kunye / okanye iinkonzo nge-imeyile kwiidilesi ze-imeyile osinike zona. Siveza ngokucacileyo ukuba ungayirhoxisa le mvume nangaliphi na ixesha ukuze usebenze kwixesha elizayo kwiidilesi ze-imeyile ozinike zona; oku kunokwenziwa ngokubhalela kwidilesi enikezwe kwisazisi somboneleli okanye nge-imeyile ku-info@papernerds.de.
Imigaqo ngokubanzi: Umthetho weFederal Republic yaseJamani; ubunyani bomthetho wentengiso ye-UN abufakwanga. Ukuba ungumrhwebi, into esemthethweni phantsi komthetho woluntu okanye ingxowa mali ekhethekileyo phantsi komthetho woluntu, indawo yokufezekisa kunye nolawulo lweekhontrakthi ezigqityiweyo kubandakanya le Migaqo neMiqathango Jikelele yiStuttgart. Ukungasebenzi kwamanqaku ngamanye ala magama kunye neemeko akuchaphazeli ukusebenza kwezibonelelo ezisele.
Kwishishini lethu, sithatha ukuba abathengi bethu ngabarhwebi abagcweleyo ngaphakathi kwentsingiselo ye-HGB. Sizilinganisela ke kwezona ndawo zibalulekileyo zingezantsi. Ukuba imigaqo kunye neemeko zakho ziphambuka kwezethu, ezakho zisebenza kuphela ukuba zingqinwe ngokucacileyo.
KwiNgxelo yaNgasese ngenxa ukuSetyenziswa Analytics Google
Le webhsayithi isebenzisa iGoogle Analytics, inkonzo yokuhlalutya iwebhu kwiGoogle Inc. ("Google"). I-Google Analytics isebenzisa okubizwa ngokuba yi "cookies", iifayile ezibhaliweyo ezigcinwe kwikhompyuter yakho kwaye ezenza ukuba ukusetyenziswa kwewebhusayithi kuhlalutywe. Ulwazi oluveliswe yicookie malunga nokusebenzisa kwakho le webhusayithi luhlala ludluliselwa kwiseva kaGoogle eMelika kwaye igcinwe khona. Ukuba ukungaziwa kwe-IP kuyasebenza kule webhusayithi, idilesi yakho ye-IP izakufinyezwa kwangaphambili nguGoogle ngaphakathi kwamazwe angamalungu e-European Union okanye kwamanye amazwe ekontrakthi yesiVumelwano kwiNdawo yezoQoqosho yaseYurophu. Idilesi ye-IP epheleleyo idluliselwa kuphela kwiseva kaGoogle eMelika kwaye ifutshane apho kwiimeko ezizodwa. Egameni lomsebenzisi wale webhusayithi, uGoogle uza kusebenzisa olu lwazi ukuvavanya ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi, ukuqokelela iingxelo kwimisebenzi yewebhusayithi kunye nokubonelela umqhubi wewebhusayithi ngezinye iinkonzo ezinxulumene nomsebenzi wewebhusayithi kunye nokusetyenziswa kwe-intanethi. In
Idilesi ye-IP ethunyelwe ngumkhangeli wakho njengenxalenye yeGoogle Analytics ayizukudityaniswa nenye idatha kaGoogle. Unokuthintela ukugcinwa kweicookies ngokubeka isoftware yakho ngokufanelekileyo; Nangona kunjalo, singathanda ukubonisa ukuba kule meko ngekhe ukwazi ukusebenzisa yonke imisebenzi yale webhusayithi ngokupheleleyo. Unokurekhoda idatha eveliswe yicookie kwaye inxulumene nokusetyenziswa kwewebhusayithi (kubandakanya idilesi ye-IP) kuGoogle kunye nokusebenza kwale datha nguGoogle
ngokukhuphela kunye nokufaka i-plug-in yesikhangeli ekhoyo phantsi kwelinki ilandelayo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Ungabhalisela incwadana yethu. Ukwenza oku, kufuneka ubhengeze le mvume ilandelayo yokukhusela idatha: "Ndingathanda ukubhalisa kule ncwadana yeendaba (ungarhoxa nangaliphi na ixesha). Ndiyayivuma idatha yam ukuba isetyenziselwe le njongo. okanye ukususwa kwale datha. Nceda uqaphele, nangona kunjalo, ukuba ngokubanzi sinedatha osinike yona ngokuzithandela kuthi.
Sisebenzisa amanyathelo obuchwephesha kunye nemibutho ukukhusela iiwebhusayithi zethu kunye neenkqubo ezinxulumene nelahleko, intshabalalo, ukufikelela, ukuguqulwa okanye ukuhanjiswa kwedatha yakho ngabantu abangagunyaziswanga. ukuba wabelana ngekhompyuter nabanye ukuthintela ukusetyenziswa gwenxa kweakhawunti yakho. Ungandwendwela iwebhusayithi yethu ngaphandle kokubonelela ngalo naluphi na ulwazi malunga nawe. Ngexesha lotyelelo olulula lwewebhusayithi, sigcina idatha yokufikelela kumxholo weefayile ezibizwa ngokuba ziifayile zelog. Le yidatha umkhangeli wakho ayenza ifumaneke kwaye ingeyoyakho eyakho, eyile:
Uhlobo lwebrawuza / uguqulelo, inkqubo yokusebenza esetyenzisiweyo, i-URL ekubhekiswa kuyo (iphepha ebelihanjelwe ngaphambili), igama lenginginya lekhompyutha efikelela kuyo (idilesi ye-IP), ixesha kunye nomhla wesicelo seseva. Asinakunika le datha kubantu abathile. Le datha ayidibananga neminye imithombo yedatha; idatha iyacinywa emva kohlalutyo lwamanani.
I-BGB isebenza kubo bonke abarhwebi abangabhaliswanga ngokwentsingiselo ye-HGB.
Izibonelelo zethu azibopheleli. Isiqinisekiso somyalelo esibhaliweyo, esinokuthunyelwa nge-imeyile okanye ngefeksi, sithatha isigqibo sokwamkelwa kwesivumelwano kunye nobungakanani bokuhanjiswa. Ukuba isiqinisekiso somyalelo wethu siqulathe ukuphambuka kumyalelo wabathengi, umthengi uthathwa njengowamkelekileyo ukuphambuka ukuba asifumananga isaziso esiphikisayo kwiintsuku ezi-5 zomhla wokukhutshwa kwesiqinisekiso somyalelo.
Amaxabiso ethu akwi-euro kunye ne-VAT esemthethweni, ngaphandle kokuba kuchazwe ngenye indlela kwisiqinisekiso se-odolo.
Ukuba izibonelelo zale Migaqo neMiqathango Jikelele azisebenzi okanye azinyanzeleki, ukunyaniseka kwale Migaqo neMiqathango Jikelele akuyi kuchaphazeleka. Amaqela anesivumelwano ayanyanzeleka ukuba asebenze kunye ukuze athabathe indawo yezibonelelo ezingasebenziyo okanye ezinganyanzelekiyo ngezibonelelo ezisebenzayo nezinyanzeliswayo ezisondela ngokukhawuleza kangangoko kumxholo wale migaqo nemiqathango.
Zonke izinto ezithunyelwayo zenziwa ngokugcinwa kwesihloko.
Sinikezela kuphela ngeenkonzo zonxibelelwano ngengqondo yeBGB. Siyabaqinisekisa abathengi bethu ukuba sibaqesha kuphela abasebenzi abafanelekileyo abanemfundo noqeqesho lobungcali oluyimfuneko ukuze kuqinisekiswe umgangatho ophakamileyo weenkonzo zethu. Asamkeli esinye isiqinisekiso.
Ngokuqala kokusebenza kwale migaqo nemiqathango, yonke imigaqo nemiqathango ebipapashwe ngaphambili ayisebenzi.